Golaha Abwaannada oo si kulul uga horyimid Dhul ka mida Tiyaatartka Qaranka oo uu kireeyay Wasiir Dubbe - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Golaha Abwaannada oo si kulul uga horyimid Dhul ka mida Tiyaatartka Qaranka oo uu kireeyay Wasiir Dubbe
Golaha Abwaannada iyo Hobollada Waaberi ayaa si kulul uga hor yimid tallaabo uu qaaday Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Xilgaarsinta Cismaan Abuukar Dubbe oo kireeyay dhisme ka mida Tiyaatarka Qaranka.
Shir jaraa’id oo ay wadajr u qabteen abwaanada iyo hobollada Qaranka ayey ku caddeeyeen inaan la kireyn karin, lana iibin karin hantida Qaranka, iyagoo dalbaday in tallaabo laga qaado Wasiir Dubbe oo ku eedeeyay inuu olole doorasho ku galayo hantida dowladda.
Agaasimihii hore ee Tiyaatarkii Qaranka Cismaan C/llaahi Guure oo farriin toos ah ugu diray Farmaajo ayaa yiri: “Hadaad been ku timid shalay Buro fool ku taaliyo Bar madow inaa tahay Maanta wan ku baranoo Bari nama dageeyside Fahad boqor ha kaa dhigo”
Agaasime ku xigeenka Tiyaatarka Abwaan C/kariin Faarax Qaarey ayaa sheegay inuu ka xun yahay isagoo ogeyn in la iibiyo Tiyaatarkii Soomaaliyeed ee umadda lahayd. “Hadii wax la dhacyo waa dhacdaa, laakiin Tiyaatar lama dhici karo.” ayuu yiri Abwaanka.
“Tiyaatarka wax jeeb lagu qaato waa ka weyn yahay…. Wasiir Dubow ilaa 1960-kii ilaa maanta waxaan kuu diiwaan gelinaa kii ugu xumaa, ugu siyaasadda xumaa, ugu kartida liitay ugu jilicsanaa ugu ducfisanaa..” ayuu yiri abwaan si toos ah u garbaashay Wasiir Cismaan Dubbe.
Abwaan Maki Xaaji Banaadr ayaa iska yiri: “Meeshaan ayey noogu yimaadeen iyagoo lebisan, jaakeysan barafuumeysan oo kaseynin Golaha Murtida, marka ay baxayaan kama yeeleyno inay noqdaaa daad wixii yaallay hore u qaata..”
“Dube iyo Shube haddii aan 24 saacadood la xirin oo la jeebeynin, dowladaa waan kasoo horjeesanaynaa, waanan ku bannaan baxeynaa..” ayey tiri Xalwo Maxamed Naxar oo ka mida Hobollada Waaberi.
Arrrintan ayaa ka danbeysay markii uu soo baxday Qoraal uu wasiirka Warfaafinta xukuumadda xilgaarsiinta Cismaan Abuukar Dubbe uu kireyn ku bixiyey si maqaayad looga dhigo dhul ka mida Tiyaatarka oo ku yaalla qeybta danbe.
Previous articleC/samad Ibraahim: Sawir-Qaadihii Daacish-ta Soomaaliya oo Xukun Xabsi ah lagu riday
Next articleDaalibaan oo isu diyaarisay inay Mareykanka kala wareegto Garoonka Kaabul iyo Weerar Gantaalo ah oo…